musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Denmark Kuputsa Nhau » Denmark inogumisa ZVESE COVID-19 zvirambidzo munaGunyana 10
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Denmark Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuratidzwa kwekupedzisira-kwe-kupera kwe COVID-19 sekutyisidzira kwakanyanya munharaunda kwakabvumidza zviremera zveDenmark kumanikidza kurambidzwa kwakadai sekumanikidzwa kupfeka-mask uye 'coronapass' zvinodiwa, pamwe nekurambidza kuungana kwevanhu vakawanda munyika.
Denmark inomira kuisa hutachiona se "chirwere chakakomba munharaunda".
Denmark ichasimudza zvese zvine chekuita nedenda munaGunyana.
Mhedzisiro mhedzisiro mhedzisiro ye "yakasimba denda kudzora".
Vanoona nezvehutano muDenmark vaburitsa chirevo nhasi vachizivisa kuti vakaita danho rekumisa kuisa COVID-19 se "chirwere chakakomba munzanga," sezvo vachidzora. Sarudzo inoreva kuti chero hwaro hwepamutemo hwezvirango zvine chekuita nedenda hunorega kuvapo nekudaro zvese zvinorambidzwa zvichasimudzwa munaGunyana 10.
"Chirwere chiri pasi pesimba, tine rekodhi yakakwira yekudzivirira," akadaro chirevo.
Nepo mhedzisiro yakanaka iri mhedzisiro ye "yakasimba denda kudzora," yakasarudzika mitemo yakaunzwa mukati Dhenimaki kurwisa hutachiona hunouraya hauchazovapo munzvimbo kutanga munaGunyana 10, sekuzivisa kwepamutemo.
Kuratidzwa kwekupedzisira-kwe-kupera kwe COVID-19 sekutyisidzira kwevanhu kwakabvumidza zviremera kumanikidza kurambidzwa kwakadai sekumanikidzwa kupfeka uye 'coronapass' zvinodiwa, pamwe nekurambidza kuungana kwevanhu vakawanda muDenmark.
"Hurumende yakavimbisa kusabatisisa matanho aya kwenguva yakareba kupfuura zvaidikanwa, uye tiripo izvozvi," chirevo chakadaro, ichiwedzera kuti hapana zvinodikanwa zvichazodiwa kunyangwe zviitiko zvikuru zveveruzhinji, uye zvakare nezve kuwana mukana wenyika husiku husiku. Zvisinei, zviremera zvakachengetedza kodzero yekusimbisa zvirango zvine chekuita neCOPVID "kana denda iri rikatyisidzira mabasa akakosha munharaunda."
"Basa rakaoma harina kupera, uye kutarisa kunze kwenyika kunoratidza kuti nei tichifanira kuramba takangwarira," Gurukota rezvehutano reDenmark Magnus Heunicke akanyora pa Twitter, uku achirumbidzawo nyika yake "denda rekurwisa."
Denmark yakanga iri pakati penyika dzekutanga kuuya pasi pezvirango zvine chekuita nedenda apo paramende yayo yakapa mutemo wekupatsanura chirwere ichi sekutyisidzira nzanga muna Kurume 2020. Kukanda mapfumo pasi kwakatangwa kare ikako, nemitemo mitsva yakazowedzerwa, yasununguka , uye yakasimbiswa mukati medenda. Pakupera kwaNyamavhuvhu, vanodarika makumi manomwe kubva muzana (70%) vevagari vemunyika vanga vabaiwa zvakakwana. Denmark yakanyoresa zvinodarika mazana matatu nemakumi mana nemakumi mana ezviuru zvehutachiona, nevanhu vanopfuura zviuru zviviri nemazana mashanu vachifa nazvo.